साताको अन्तिम कारोबार दिन अधिकांश उपसूचक हरियो, ३ कम्पनीको शेयर सकारात्मक हेर्नुस त !! निषेधाज्ञाको दिन चम्कियो सेयर बजार, २५ अंकको वृद्धि - Aajako Nepali Khabar
साताको अन्तिम कारोबार दिन अधिकांश उपसूचक हरियो, ३ कम्पनीको शेयर सकारात्मक हेर्नुस त !! निषेधाज्ञाको दिन चम्कियो सेयर बजार, २५ अंकको वृद्धि
साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेका अधिकांश उपसूचकहरु हरियो भएर बन्द भएका छन्। कारोबारमा आएका १३ उपसमूहका सूचकहरुमध्ये यस दिन ११ उपसमूहका सूचकहरु बढेर बन्द भएका छन्।
जसमध्ये व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक ३.४८ प्रतिशत बढेको छ भने जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक ३.२१ प्रतिशत बढेको छ। कारोबारमा आएको विशाल बजार कम्पनीको शेयरमूल्य बढेसँगै व्यापार उपसमूहको परिसूचक बढेको हो। त्यसैगरी, अधिकांश जलविद्युत कम्पनीहरुको शेयरमूल्य बढेपछि यस उपसमूहको परिसूचक पनि बढेको हो।
यस दिन अन्य उपसमूहको परिसूचक २.५४ प्रतिशत बढेको छ भने उत्पादन तथा प्रशोधनको १.८४ प्रतिशत बढेको छ। यस दिन होटल तथा पर्यटन र लगानी उपसमूहको परिसूचक भने सामान्य घटेको छ।
कारोबारमा आएको नारायणी विकास बैंकको यस दिन सर्वाधिक कारोबार भएको छ। सो कम्पनीको यस दिन ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर खरिदबिक्री भएको छ।
यस दिन कारोबारमा आएको सिंगटी हाइड्रो, महिला लघुवित्त र विशालबजार कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यसैगरी, सान्जेन जलविद्युत कम्पनीको शेयरमूल्य यस दिन साढे ८ प्रतिशत बढेको छ भने एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर र हिमालयन पावर पार्टनरको शेयरमूल्य ७ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ।
शेयरमूल्य घटेका कम्पनीहरुको गिरावट दर भने न्यून नै रहेको छ। यस दिन सर्वाधिक शेयरमूल्य घटेका १० कम्पनीहरुको सूचीको शीर्ष स्थानमा श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी रहेको छ जसको मूल्य २.८२ प्रतिशत घटेको छ।
यी राशिका मानिस सबैभन्दा कन्जुस हुन्छन् , तपाईको कुन राशि मा पर्नुहुनछ हेर्नुहोस ?
२१ अर्बको ठेक्का रोक्न सेनालाई लेखा समितिको ताकेता